VM E2, mhuri nyowani yemamishini chaiwo kubva kuGoogle | Linux Vakapindwa muropa
Mutungamiriri wezve chigadzirwa chigadzirwa Google yakazivisa kusvika kweVM E2, mhuri hombe yemashini chaiwo iyo yakatangwa mune beta mamiriro eGoogle Compute Injini. E2 mhuri inoshanduka-shanduka yemakina chaiwo ane "masimba esimba manejimendi manejimendi" anokwanisa kuendesa mashandiro akavimbika nemashandisirwo anochinjika uye nemutengo wakakwana wevaridzi (TCO) wemimwe michina yese paGoogle Cloud.
Iyi mhuri nyowani yeyakajairika-chinangwa chaiwo michina iri yakakodzera mhando dzakasiyana dzebasa. Google inoti kunze kwekuwanda kwemabasa anorema, inofanira kukwanisa kuendesa mashandiro akafanana neayo "N1" mhando yemuchina nemutengo wakaderera. Sekureva kweGoogle, iyi mhuri yemashini chaiwo inovandudzwa kuti inyatsogadzirisa ayo latency-inonzwisisika uye mushandisi-yakanangana nemasevhisi.
June Yang akati pane yake blog:
“E2 chaiyo michina yakanakira huwandu hwakawanda hwekutakura, kusanganisira mawebhusava webhu, mamishinari-anokosha ekushandisa, dhatabhesi diki, uye budiriro uye pakati nepakati nharaunda. Kana iwe uine basa rekuremekedza iro rinoita mushe paN1, asi risingade zviitiko zvakakura, maGPU emuno, kana maSDD, funga kuvaendesa kuE2. Akawedzera kuti "kune vese asi mabasa anonyanya kudiwa, isu tinotarisira kuti E2 ichaunza mashandiro akafanana kuN1, nemutengo wakaderera kwazvo."
Yang anowedzera kuzivisa izvozvo simba rekushandisa zviwanikwa manejimendi E2 chaiyo michina inopa mashandiro akafanana neGoogle yeN1 mhuri, asi zvichienzaniswa neavhareji yekuchengetedza ye31 muzana mumutengo wakazara wevaridzi.
Iyo nyowani chaiyo michina zvakare inoshanduka chaizvo, kubvira vane gumi nemasere akafanorongedzwa. Aya marongero anoenda kubva kungori 2 vCPUs uye 2GB yekumusoro, inosvika kuma16 CPUs uye 128GB yekuyeuka.
Naizvozvo, chaiwo michina inowana inogara-kwenguva mashandiro pamutengo unogara wakaderera. E2 chaiyo michina inokwanisa kubata yakakwira CPU mutoro pasina mutengo wakaomarara, kusiyana nesarudzo dzakaenzana kubva kune vamwe vatengesi pamusika, sekureva kweGoogle.
E2 chaiyo michina ivo vanongogovera izvo zviwanikwa izvo zvinoda mushandisi kana nekwaniso yekushandisa tsika mhando mhando. Tsika dzemuchina mhando dzakanaka yezviitiko apo mabasa anorema anoda kuwanda simba rekugadzirisa kana zvimwe ndangariro, asi hazvidi zvese zvinogadziridzwa zvinopihwa neinotevera nhanho yemuchina.
Mune mamwe mazwi, vCPUs inoitwa tambo dzakarongerwa kumhanya pane zvinodiwa senge chero imwe tambo pane iyo inomiririra: kana iyo vCPU iine mitoro yebasa, inogoverwa yepanyama CPU inowanika kumhanya kusvika 'kuti isunungurwe basa rapera.
Saizvozvowo, chaiwo RAM mepu kune chaiwo epamhepo mapeji kuburikidza nematafura emapeji anowanda kana peji revaenzi rikawanikwa kekutanga. Iyi mepu inoramba yakagadziriswa kudzamara muchina wataridza kuti iro peji revaeni rekunyama harichadiwe.
Kana michina chaiyo yaiswa pamubati, mashandiro avo anoramba achiongororwa, saka kana kudiwa kwemuchina chaiwo kuchiwedzera, kurarama kutama kunokwanisa kushandiswa kuendesa mutoro weE2 kune mamwe mauto munzvimbo yedata.
Basa racho rinowanzo shanduka pasina nguva yekumirira, nekuda kwenzira yekufungidzira kubva kuGoogle. Sekureva kweGoogle, kurarama kwekutama kwemuchina chaiwo chikamu chakaratidzirwa cheinjini yekomputa uye mashandiro ayo akaramba achivandudza nekufamba kwenguva.
Kuti uwane zvinangwa zvekuita zveE2 chaiwo michina, Google yakagadzira yakarongeka CPU scheduler ine nani latency uye zvirinani maitiro joint programming kupfuura default Linux programmer.
Iyo itsva scheduler inogadzira isingasviki pane microsecond avhareji yekumuka-nguva dzekutenderera nekukurumidza mamiriro ekuchinja, zvichibatsira kuchengetedza zvisina kufanira zvine simba manejimendi manejimendi pamusoro peinenge chero basa rakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » VM E2, iyo mhuri nyowani yemamishini chaiwo kubva kuGoogle